काठमाडौँ - शहरमा ब्यवसाय गर्दै आएका युवाले गाउँमा समेत नयाँ ब्यबसायको थालनी गरेका छन्। देशमा गाउँबाट सकेसम्म विदेश जाने नसके शहर भएपनि भासिने होडबाजी जस्तै चलिरहेको परिपेक्षमा गुल्मेली युवाले ठिक त्यसको उल्टो लय पकडेका हुन्। गुल्मेली युवा राजिब बस्नेतको काठमाडौँको ठमेललगायतका स्थानमा रेष्टुरेन्टहरु संचालनमा छन्। नयाँ बसपार्कस्थित बिजी मलमा कपडा पसल छ। नयाँ बानेश्वरमा ट्राभल एण्ड टुर्स तथा टिकेटिंगको अफिश छ। ठमेलमा मनि रेमिट संचालनमा छ। जन्मभूमिलाई नै कर्मभुमि बनाउन पर्छ भन्दै बिगत लामो समय देखि लागिपरेका बस्नेत कर्मभूमि नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष समेत हुन्। संस्थाले ...
१. के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्छ?हालसम्म कोरोना भाइरस लामखुट्टेको टोकाईबाट सरेको पुष्टि भएको छैन। यो श्वासप्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाछ्युँ गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। २. के लसुन खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बँच्न सकिन्छ?हालसम्म लसुन खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट रोकथाम भएको तथ्य प्रमाणित भएकोे छैन। लसुन स्वास्थ्यका लागि लाभदायक खाना हो र यसले मानिसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। ३. के तिलको तेलको मालिसले कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ?तिलको ...
खोटाङ - हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ककनी डाँडालाई ‘रक गार्डेन’ का रुपमा विकास गर्ने भएको छ। त्रि–धार्मिकस्थल हलेसी नजिकै रहेको ककनी डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न ढुंगे बगैंचा बनाउने तयारी गरिएको हो। विभिन्न आकृतिका ढुंगैढुंगाले ढाकिएको डाँडालाई ‘रक गार्डेन’ का रुपमा विकास गर्न डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पु-याइएको मेयर इवन राईले बताए। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा पर्ने ककनी डाँडाको करिब एक सय ६० रोपनी सरकारी जग्गा चट्टानै–चट्टानले ढाकिएको छ। सिंगो डाँडामा खोपेर बनाएजस्ता चुच्चो–चुच्चो परेका ढुंगा छन्। त्यसमध्ये ५६ रोपनी जग्गाभित्रको चट्टानलाई समेटेर ‘रक गार्डेन’ बनाउने ...
काठमाडाैं - सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० लाई सफल पार्न तीव्र रुपमा काम गरिरहेकाे जनाएकाे छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० लाई सफल पार्न विभिन्न ४० मुलुकका पर्यटन मन्त्रीलाई निमन्त्रणा पठाइएको जानकारी दिए। विभिन्न मुलुकका मन्त्रीसँग पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयमा विचार आदानप्रदान गरिने उनले बताए। भ्रमण वर्षलाई लक्ष्य गरी विश्वका विभिन्न चर्चित व्यक्तित्व तथा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई समेत निमन्त्रणा गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए। “काठमाडौँसहित सात प्रदेश र विदेशी कूटनीतिक नियोगमा समेत आगामी जनवरी १ तारिखका दिन राष्ट्रिय महोत्सवका साथ कार्यक्रम गरिनेछ”, काठमाडाैंमा शुक्रबार ...
काठमाडौं - नेपाल र चीनबीचमा भएको १४ बुदेँ संयुक्त वक्तव्यमा सगरमाथाको उचाइको विषयसमेत समेटिएको छ। दुवै देशको सीमा छुट्टाउने विश्वकै अग्लो सगरमाथाका विषयमा दुई देशको संयुक्त वक्तव्यको बुदाँ नम्बर ८ मा अटाएको छ। उक्त बुदाँमा नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको उचाई संयुक्त रुपमा घोषणा गर्ने सहमति उल्लेख छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको अन्तिममा जारी १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा माउन्ट सगरमाथालाई नेपाल र चीन मित्रताको प्रतीक भएको स्वीकार गरिएको छ। जलवायु परिर्वतन र पर्यावरणको रक्षाका लागि दुई देशले सहकार्य गर्ने पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। सीले रात्रीभोजको ...
पोखरा - हिमाल पारिको जिल्ला मनाङको हुम्दे विमानस्थलमा पक्की रनवे बनेको ६ वर्षपछि पोखरा-मनाङ हप्ताको एक उडान भर्ने तयारी गरिएको छ। २०७० मा मनाङको हुम्देस्थित विमानस्थल कालोपत्रे भएपछि पनि नियमित उडान हुन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा-मनाङ जहाज संचालन गर्न पहल गरेको हो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालसहित १५ जनाको टोली शुक्रबार समिट एयरको जहाजबाट पोखराबाट मनाङको हुम्दे मिानस्थल पुगेर फर्केका छन्। पोखरा—मनाङ नियमित उडान गर्न सकरात्मक सन्देश दिन मुख्यमन्त्री, पर्यटनमन्त्रीसहितको टोली मनाङ पुगेर फर्केको गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले बताएको छ। हप्तामा ...
काठमाडौं - छिमेकी चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण शनिबार सुरु गरेको छ। रेलमार्गको दुरी ५४० किलोमिटर छ। जटिल भौगोलिक क्षेत्र रहेकाले रेलमार्ग निर्माण कम्तीमा सात वर्षमा पूरा हुने अनुमान छ। ‘चीनले अब केरुङलाई रेलमार्गसँग जोड्ने निश्चित छ,’ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘केरुङ रेलमार्ग तिब्बत सरकारको प्राथमिकता हो। तर भौगोलिक जटिलताका कारण ढिलाइ भएको थियो। अब काम अघि बढेको छ।’ नेपालमा निकै समयदेखि केरुङमा रेल आउने विषयमा चर्चा हुँदै आएको छ। केरुङमा रेल आएपछि काठमाडौं ल्याउन सहज हुने विश्वास छ। काठमाडौं–रसुवागढी (केरुङ सीमा) रेलमार्ग ७२ किलोमिटर ...
लण्डन - डिस्कभरी च्यानल हेर्नुभएकै होला, त्यहाँ प्रशारण हुने ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’मा देखिने बियर ग्रेल्स एक साहसी र रोचक पात्र लाग्छन् । बेलायती खोजकर्ता बियरको जीवन अनवरत रुपमा ‘एड्भेन्चर’ले भरिएको छ । परिवारले उनलाई दिएको नाम एड्वर्ड माइकल ग्रेल्स थियो । ‘बियर’ चाहीँ उनकी दिदीले जन्मिएको केही हप्तामै ‘निकनेम’ राखिदिएकी थिइन् । बियर पढाइको लागि बेलायतको आकर्षक स्कुल एटोन कलेज पुगे । र त्यहाँ उनले चर्चित संस्थाको माउन्टेनियरिङ क्लब स्थापना गरे । जहाँ उनले यसबारे शीप पनि सिक्ने मौका पाए । त्यसबेला सिकेका शीप उनले पछि टेलिभिजन ...
रेकर्ड ब्रेक : एघार महिनामा १० लाख पर्यटकले नेपाल भिजिट गरे
काठमाडौं – नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा नयाँ रेकर्ड बनेको छ । सन् २०१८ को ११ महिनामा १० लाख १ हजार ९ सय पर्यटक नेपाल आएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । यो संख्या सन् २०१७ को तुलनामा १७ प्रतिशतले बढी हो । यो संख्यामा अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउने पर्यटक समावेश गरिएको छैन । स्थलमार्ग हुँदै आएका पर्यटकको संख्या पनि जोड्दा पोहोरको ११ महिनाको तुलनामा यो वर्ष नेपाल आउने पर्यटकको संख्या २३ प्रतिशतले बढ्ने बोर्डले जनाएको छ । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय ...